Vehivavy fahadimy novonoina tany Azerbaijan tao anatin’ny 10 andro · Global Voices teny Malagasy
Novonoina tamin'ny Alahady 25 Jolay i Nargiz Mustafayeva
Voadika ny 03 Aogositra 2021 5:06 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Português, Swahili, Français, Español, English
Pikantsary nalaina tao amin'ny tatitra nataon'ny Meydan TV momba ny famonoana vehivavy ao Azerbaijan.
Nokendaina ho faty tamin'ny Alahady 25 Jolay i Nargiz Mustafayeva, mponina ao amin'ny Distrikan'i Barda afovoany. Voasambotra ny vadiny, Agil Mustafayev, teraka tamin'ny taona 1983. Araka ny voalazan'ny biraon'ny Fampanoavana, novonoin'i Mustafayev ny vadiny noho ny fifamaliam-pianakaviana.
Mustafayeva no vehivavy fahadimy novonoina tao Azerbaijan tato anatin'ny 10 andro.
Tamin'ny 24 Jolay, voalaza i Meykhosh Jafarov fa nanindrona antsy ny vadiny, Khatira Farajova, ho faty. Raha ny filazan'ny fampanoavana dia matetika i Jafarov no mampijaly an'i Farajova sy ny zanany.
Tamin'ny 23 Jolay, voalaza fa nanindrona antsy sy namono an'i Lyudmila Tatachenko vadiny taorian'ny fifamaliana i Zarbali Guliyev.
Tamin'ny 22 Jolay, voalaza fa namono an'i Mubarak Agayeva tamin'ny antsy taorian'ny fifamaliana ihany koa i serzà polisy Aliaga Soltanov.
Tamin'ny 16 Jolay, notsatohana antsy in-23 tao amin'ny hotely iray tao Baku ilay mpihira Aygun Mirzayeva. Nilaza i Ali Mammadov, izay nosamborina noho ny famonoana azy, fa mpifankatia izy roa ary niaiky ny famonoana azy.
Tsy manana fiarovana fototra akory ny vehivavy any Azerbaijan raha ny filazan'ilay mpikatroka feminista Gulnara Mehdiyeva. “Heveriko fa porofon'ny maha-marefo ny vehivavy ao amin'ny firenena ireo famonoana vehivavy ireo. Satria amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy dingana voalohany amin'ny herisetra ilay famonoana olona fa dingana farany,” hoy i Mehdiyeva tamin'ny OC Media. Nampiany hoe:
Matetika fantatra amin'ny herisetra ataony amin'ny vadiny na ny olon-tiany ireo mpamono olona. Ohatra, namono ny vadiny mikasa ny hisara-panambadiana ilay rangahy ary nanararaotra azy sy ny zanany telo. Izany no anton'ilay fisaraham-panambadiana.
Nanamarika i Mehdiyeva fa “nanao ny zava-drehetra momba ity tranga ity afa-tsy izay tokony ataony” ireo sampan-draharahan'ny mpitandro ny filaminana.
Tsy manao na inona na inona hiarovana ny vehivavy mialoha ny fotoana hamonoana azy ireo ny politikan'ny firenena sy ny lalàna ankehitriny. Tsy te hanokatra trangana heloka bevava ny polisy, indrindra momba ny herisetra an-tokantrano. Rehefa mangataka fitoriana any amin'ny polisy izy ireo dia entanina ny mpangataka mba hisintona ny fitoriany mba hampihenana ny isan'ny tranga. Manao ny zava-drehetra izy ireo [ny polisy] afa-tsy ny asany ihany.
Nilaza tamin'ny OC Media i Mehdiyeva fa mipaka hatrany amin'ny rafitry ny fitsarana ao amin'ny firenena ihany koa ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitra. “ Tsy manome rariny ny fitsarana; ny sampan-draharaha misahana ny fiarovana ara-tsosialy tsy afaka manome fanampiana ara-tsosialy ho an'ireo vehivavy tsy an'asa manan-janaka. Vokatr'izany, voatery manohy miaina miaraka amin'ny herisetra ny vehivavy. Miafara amin'ny famonoana olona izany.”